Xanuun, sida loo xalliyo dhibaatada? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » QODOBO • WAXYAABAHA CAAFIMAADKA • beauty »Acne, sida loo xaliyo dhibaatada?
Xanuun, sida loo xalliyo dhibaatada?
Xusuusin xun ee qaan-qarankeenna,finan sidoo kale waxay ku dhacdaa qaangaarnimada. Waxaan ka qaadannaa kaydka badhanahan.
Acne, waa maxay?
Thefinan waxay qaadan kartaa qaabab badan: finan cas, madax madow, madaxyo cad iyo xitaa fareemaha buuxsamay malax. Jirka maqaarku inta badan waa ogyahay iyo saliid. Marmarka qaarkood waxaannu ogaan karnaa nabaro gaboobay oo hore u sameeya maqaarka. Finanka finanka waxaa keena qanjirro qulqulaya oo qoyan oo soo saara sebumo badan. Sebum waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo maqaarka si uusan u engegin. Hase yeeshee, marka ay kor u kacdo, sebum ayaa ka soo baxa dhererka iyaga oo xirxiraya. Maqaarku wuxuu noqonayaa mid aad u badan oo bakteeriyadu halkaas ku kori karto, laba arrimood oo keena finan.
Yaa ugu saameynaya finanku?
Dhalinyaro ayaa ah kuwa ugu saameynaya finanku. Ku saabsan 85 boqolkiiba dhalinyarada da'doodu yar tahay waxay yeelan doonaan hal ama kabadan finankooda inta ay qaan-gaarayaan. Xaqiiqdii, wax soo saarka sebumiga badani badanaa waxaa keena isbeddel hormoon ah. Iyo inta lagu jiro dhalinyarta, isku dheelitir la'aanta waa caadi! Markii qaan-gaar ah, finanku sida caadiga ah way dhacaan. Laakiin xNUMX% dadweynaha, finanku way joogi doonaan. Sidoo kale, mid ayaa arki kara burqashada finanka inta lagu jiro xilliga caadada ama uurka.
Calaamadaha sii kordhaya finanku
Nadiifinta xun ee maqaarka. Nadaafadda iyo nadaafadda maalin walba waa lagama maarmaan.
Isticmaalka xad-dhaafka ah ee muusikada Xayeysiin aad u badan ama doorashooyin wax soo saarka xun ayaa miisaami kara maqaarka waxayna xoojin karaan finanka.
Timaha u dhaw maqaarka. Haddii aad leedahay timo dufan leh, sidoo kale waa calaamad muujinaysa qanjidhada qanjirka. Sidoo kale, haddii timuhu si joogto ah u taabto wajiga iyo meelaha finanku, waxaa laga yaabaa in ay noqdaan in ay noqdaan hab lagu qaado bakteeriyada iyo caabuqyada.
Burburinta badhanka. Ka dibna waxaan ku fidinaa infekshanka oo lumiyaa xakameynta faafidda finanka. Waa in aanad taaban.
Qaadashada daawooyinka qaarkood, gaar ahaan kuwa iyagu abuuri kara isku dheelitir la'aanta hormoonka.
Qorraxda Mid ayaa laga yaabaa inuu u malaynayo in qorraxdu ay ka caawiso maqaarka finanka iyadoo si ku-meel-gaar ah u qallajisa maqaarka iyo qanjidhada qanjidhada, laakiin finanku way soo noqdaan. Waa inaan sidoo kale sii wadnaa inaan ilaalino maqaarkeena iyadoo la isticmaalayo qorrax cad, finan ama aan.
Waxqabadka wanaagsan ee lagaga hortago finanka
Ma jiro wax khaas ah, kuwa saaxiibadaada isticmaala ama kuwa si fiican u uraya! Maya, alaab ku filan nooca maqaarka noo. Maalin kasta waxaan ku nadiifinnaa daryeel. Waxa kale oo aan dooran karnaa alaabo loogu talagalay maqaarka finanka oo aan hoos udhicin indhaha.
Dhaq, laakiin ma aad u badan
Waxaan samaynaa arin caadi ah subaxdii iyo fiidkii, laakiin waa qalad in la aamino in dhaqdhaqaaqyada badani ay ku guulaystaan ​​in ay maqaarku yaraadaan. Haddii aad kicineyso qanjirada qatarta ah ee aad u badan, tusaale ahaan adigoo dhaqaya, waxay bilaabi doonaan inay soo saaraan wax ka badan ... sebum!
Iska ilaali meelaha aadka u daran ee taabanaya
Hadday timo timaado, xiran koofiyad, madax-wareeg, muraayado, iwm, waa inaad taxadarisaa. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa inaad iska ilaaliso taabashada wajigeena inta badan gacmaheena. Iskusoo wada duub, marna ha isku dayin inaad foorno ku duubto; waxaanu halis ugu jirnaa abuurista xanaaq cusub. Inta badan waxaan taabannaa badhkeena, jeermisyada badan ayaa leh fursad ay ku sumoobaan aag caafimaad leh.
Sidaa awgeed, waxaanu hubinaynaa in biyo nadiif ah ee maqaarkeenna.
Alaab wanaagsan oo ka soo baxa finanka
Marka aan dukaanka ku duugno maqaarkeena, waxaan doorbideynaa kuwa ku jira kiimikada benzoyl ama salicylic acid, laba xabbadood oo ku dheggan maqaarka iyo ka hortagga fidinta bakteeriyada.
Jooji in waalidku dareemaan dambiile aan ku jirin ilmo labaad - SANTE PLUS MAG
Ka saar dhammaan sunta sunta oo aad ka hesho barnaamijka 2 Day Detox Program - SANTE PLUS MAG